Ikhaya » Iivenkile » NDIFUNA UKUYEKA
Xa uyeka icuba ngokulungileyo, uthatha elona nyathelo libaluleke kakhulu kwizibonelelo ezinjengokuba sempilweni, ukugcina imali kunye nokugcina usapho lwakho lukhuselekile. Nokuba uyatshaya, sebenzisa idiphu, okanye usebenzisa iisigarethi ze-elektroniki (ezaziwa njengee-e-cigarettes okanye ii-e-cigs), unokufumana uninzi okanye oluncinci apha njengoko ufuna. Icuba likhobokisa kakhulu, kwaye kunokuthatha amanyathelo amaninzi ukuze ekugqibeleni uyeke ukulunga. Kwaye konke ukuzama kubalwa!
Ezi zixhobo zasimahla kunye neenkqubo zenkxaso zikunika iindlela ezininzi zokuyeka ukutshaya okanye enye icuba ngendlela esebenza ngayo. Iinkqubo ezingama-802Quits, ezinje ngokuPhuma kwi-Intanethi okanye ngeFowuni (1-800-YEKA-NGOKU) zibandakanya izicwangciso zokuyeka.
Yenza isicwangciso sokuyeka>
Fumana Uncedo Lokuyeka>
Fumana isiKhokelo sakho sokuShiya ngokuSimahla
Nokuba uzame amaxesha ambalwa, okanye oku kukuzama kwakho okokuqala, unezizathu zakho zokufuna ukuyeka. Esi sikhokelo sephepha le-44 siyakunceda inyathelo ngenyathelo ukuba wazi izinto ezibangela ukuba ube nakho, ulungele imiceli mngeni yakho, ulungelelanise inkxaso, uthathe isigqibo ngamayeza kwaye uhlale uyeke. Ukuba uyiVermonter kwaye ungathanda ukucela isikhokelo sokuyeka, nceda imeyile tobaccovt@vermont.gov okanye ukhuphele Isikhokelo sokuyeka iVermont (PDF).